Kazan, inhlokodolobha Tatarstan - yindawo enhle. Lo muzi has eziningi ezikhangayo: yasendulo kanye yesimanje. City uye wakwenza kabusha, echitha eziningi emihlanganweni ngamazwe emazingeni ahlukahlukene.
Njengoba ayezalelwe eU.SSR
Ngokuvamile, i-main emzini Tatarstan ngokuthi inhloko-dolobha wesithathu ezweni lethu. Elinye lamadolobha amahle kakhulu e-Russia zanamuhla Kazan. Ukunqoba Park ezindaweni eziningi e Russian Federation, futhi ukhona kulo muzi. Thina wasibeka Nokho ezikhathini Soviet, kodwa muva nje kuphela - ngo-1978. Umqondo yokudala kwepaki wayemuhle nendawo neziphathimandla zedolobha sibeke ngqo kuye - lutho ebezidiliziwe, nje sokukhipha ixhaphozi. Le ndawo lalibuswa epaki amahektheli 50. Ngemva ukulungiselela zensimu waphula ezizungezile futhi izihlahla vysalili e isamba elihambisana ngamunye ngosuku empini - ingqikithi 1418 izingcezu.
Sakwazi ukungena sonke round usuku
Wawusungene ezikhathini ezinzima, izwe liye lasinda futhi waqala ukuvuseleleka. Sekuyisikhathi phindela amaphrojekthi okuqaliswe futhi sidle ngenxa yokuntuleka nokuxhasa ukwakhiwa. Yonke leminyaka nzima Kazan Victory Ipaki kancane ukuthuthukisa, futhi ngo-1995 wabeka futhi waqala ukwakha emnyuziyamu ku insimu yalo. Bese kuthi-ke izihlahla usukhulile. embukisweni eziphathelene nezempi lahlelwa. Futhi ngo-2005, umkhosi wokugubha 60 we Zinikeleni laseJalimane lobuNazi, Ukunqoba Ipaki sivulwe.
Kuyo yonke le minyaka 27 ukuba akhe kabusha Kazan Victory Park: eziqoshiwe babekwa kanye namatshe amade abaziwe, Museum lakhiwa. Ngenxa yalokho, lapho uvusiwe eziningi izinto nemicimbi ephathelene le Mpi Enkulu.
Memorial Okuphakade Flame
Futhi-ke, njengoba kwezinye amapaki eziningi enikelwe le micimbi okukuthinte ngayo yonke imikhaya, inhliziyo yakhe iyona ilangabi okuphakade. Memorial iseduze omunye ekungeneleleni kwepaki.
Lizungezwe kela, ubeke amapuleti okuyinto kwatywinwa ishumi amagama abakhileyo Tatarstan, abanikela ukuphila kwabo ngenxa yezwe lakubo. Phakathi kwabo - Heroes 200 eSoviet Union futhi amalungu 29 Order Inkazimulo. On isethi eziyisikhombisa emhlabeni stelae yesikhumbuzo, ngamunye ozinikezele komunye elihamba yizabelo eziyisikhombisa (bedalwa e Kazan), immortalized amagama amasosha. Kuyacaca ukuthi yisikhumbuzo - yesehlakalo eyinhloko a idunyiswe ukunqoba. Lubekezelela izimbali zonke Kazan. Ukunqoba Ipaki uguqulwa ikakhulukazi ngalolu suku. Ngezinye umlilo Okuphakade unogada abahlala abasha we dolobha Tatarstan.
Itshe kanye Museum ezivulekile
A kancane okwengeziwe, ekujuleni epaki, phezu avenue main, itholakala imitha-42 Itshe "Wokunqoba", okuyinto ethwele umqhele omuhle umfire ishiya - Wreath abawinile. Ihlobise enhle Itshe Order of Victory.
Phansi Yezizwe 'Yokunqoba "kukhona eziqoshiwe iqhawe futhi umama nengane ngezingalo zakhe. Emadolobheni amaningi kulezi amapaki, iyindawo ethandwa kakhulu yizivakashi kuyinto Museum eziphathelene nezempi, engaphansi esibhakabhakeni evulekile. Kodwa lokhu Museum e Kazan omkhulu - lapha, ngaphezu amathangi, izimoto armored, howitzers kanye wezikhali izingcezu, kukhona edume "Katyusha", indiza, kuhlanganise MIG abadumile. Ngaphezu kwalokho, kukhona enophephela emhlane, kanti missile eziyinkimbinkimbi "Luna-M" babebuye lapha yokupaka okuphakade, kodwa zonke embukisweni nezempi isesimweni esihle. Futhi muva nje, ngoSuku Navy, isethelwe gumbi elibuyiselwe ngwenya K-403 "Kazan '. Eduze gumbi hung isikhencezo, walaliswa ehlotshiswe amajazi izingalo emaphandleni nasemadolobheni. Ungacabanga ukuthi ingakanani injabulo ukunika izingane ithuba nokugibela abanikeze asebenza nabo indiza, noma ngawakhamela ku ethangini!
Ukuze wakhe owakho inani elidingekayo kwemizila Imithi etshalwe ngendlela ethile: kwathiwa yawo yasekuqaleni ukuba ngamunye kubo uyosebenza kunoma iyiphi uhlobo oluthile kwezikhali. Alley omama abangabodwa, abafelokazi, abesifazane ngokuvamile, isiphetho okuyinto perekorezhivshey impi, lapho futhi ilapha.
Kodwa Victory Park - akuyona kuphela indawo yokulila nikhulekele ukubonakaliswa kwamandla okukhulu abantu baseSoviet, izakhamuzi Tatarstan. Ibé, ngemizamo neziphathimandla, iholidi endaweni oluthandayo bendawo, futhi lena inkumbulo engcono sabafileyo.
Kukhona njalo, ikakhulukazi ngamaSonto, eziningi izivakashi. Leli paki linezintaba ichibi elihle yokufakelwa. Ingabe izakhamuzi kwakukhona lesiko ukuhlela amanzi awo imithambo imincintiswano iphethwe yi- umsakazo. Futhi isiko uye bagxilile ukuze ngo-2006 echibini owawuse ubuqhawe Russia ku yamahhashi umsakazo izikebhe elawulwa. Ukubhukuda echibini asivumelekile, kodwa ungakwazi ukugibela a isikebhe. Kunenye emanzini epaki, itholakala enyakatho-esempumalanga. Yena yafakwa kanye ekhethwe amadada.
Lokhu epaki yesimanje has a lot of yini amapaki manje ezikhangayo ezisemadolobheni. Ngakho, ngokusebenzisa ezizungezile, ungakwazi ukugibela begibele amahhashi aseShetland iyatholakala ukuze iqashwe ezihlukahlukene imishini ezemidlalo. Futhi-ke, kokubili epaki futhi azungeze eziningi amathilomu. "I Ukunqoba Park" (Kazan, Yamasheva Prospect, 36) - endaweni ethokomele enjalo ukuthi bonke izakhamuzi zedolobha ezaziwayo. Izinzuzo cafe "Ngezinye Victory Park" Uyi-European, Russian futhi Tatar cuisine omkhulu, elikhulu ithala ehlobo. Famous for sikhungo amanani kunalokho ezinengqondo (le score isilinganiso - ruble 500).
Indawo kanye nokwenzeka emnyango
Njengoba kuphawulwe ngenhla, ngaphasi yesikhumbuzo amasayithi agodliwe nasemaxhaphozini. Likuphi Victory Park (Kazan)? Kanjani ukuze uthole kule ndawo abathandwa bendawo? Le ndawo ahlukanisa eNew Savinovsky wesifunda. Insiza itholakala lapho emgwaqweni eyayiphambana Bondarenko futhi avenue yaqanjwa lokuqala Tatar kwamaBolshevik nomlobi Husayn Yamasheva. World Cup 2018 lapha ongaphansi komhlaba line oyokwenziwa, futhi manje esiseduzane esiteshini epaki - "Imbuzi Sloboda". Ungathola ukupaka ibhasi № 5, 28a, 33, 46, 49, 60 futhi 13 umzila inqola. Ukunqoba Park (Kazan) has ekhelini elilandelayo: Kazan, Yamasheva Avenue / Street Bondarenko.
Kulo lonke leli zwe futhi kunenkolelo eyaziwayo kakhulu kugujwa iminyaka engu-70 Ukunqoba Omkhulu. Enhloko-dolobha yase-Tatarstan Ngenxa yokuqhuma cishe unyaka babe nomsebenzi wokuvuselela umhlaba ngemva ezindaweni ezikhulekelwa njengezithixo Victory Park (Kazan). Ukwakha siqedelwa Meyi 9, 2015. Lona wesifazane wamthinta hhayi kuphela onkulunkulu, lapho kukhona amagama entsha amasosha ngaphambili kwabikwa ukuthi badukile. Salandelwa izindlu, izinyathelo steel egwadle, ilangabi ezingunaphakade ngaphansi ipuleti senziwa egwadle okuqinile. Ngaphezu kwalokho, Itshe "Wokunqoba" futhi elinemipheme ubhekene nalesi amathayili entsha travertine. Kwenziwe umsebenzi yokuthuthukisa ukukhanyisa ka kwepaki (ikakhulukazi, kwi Itshe wamiswa izibani ezintsha), ngokugcwele esimweni nezempi. On azungezwe yisikhumbuzo kwanezelwa imibhede. Eduze abafelokazi Mall uvele utshani IsiZulu ophelele, nendawo ahlukene kukhona manje ie-ncwadi kukhunjulwa izisulu zenhlekelele. Kwakuthinta kakhulu esenzelwe iminyaka engu-70 Ukunqoba.
Ikamu Wezingane "Inkanyezi"
Kuphi kwi "Sylvester", noma New Year ePoland
Lenin Hills (eMoscow): umlando, indawo
The yokungcebeleka emzaneni Arkhipovka-Osipovka: Phumula
Yini izivakashi Svirsky ensungubezini?
Victory Monument e Moscow - inkumbulo izingane we ubuqhawe wawoyise
Indlela yokwenza utamatisi juice ebusika ngokusebenzisa juicer? Recipe yinoma ubani
Antiseptic "Klatsid": yokusetshenziswa
Izintandokazi movie amantombazane: uhlu
Ihlanganisa for izinduku ukudoba - iyingxenye ebalulekile igiya umdobi sika
Indlela Fry amadombolo kuso kuzo zonke izindlela
UAZ-390944. UAZ "Farmer"
Elihambayo amabhande. izakhiwo Special nezici.
Imithi yokuhlambulula isisu "Duphalac 'ngoba umntwana. Siza ne ukuqunjelwa
Comedy namaSoviet "Inhloko Chukotka": umlingisi Mikhail Kononov nendima yakhe yokuqala Starring-movie
Sun Club 3 * (Djerba, Tunisia): incazelo, izinsizakalo, ukubuyekezwa
U-Amy Adams: i-biography, ifilimu kanye nokuphila komuntu wesithandwa (isithombe)